Aasaaska Suuqgeynta Wanaagsan iyo Xun | Martech Zone
Aasaaska Suuqgeynta Wanaagsan iyo Xun
Talaado, Nofeembar 11, 2014 Talaado, Nofeembar 11, 2014 Douglas Karr
Waxay umuuqataa in xikmaddu kamid tahay waxyaalahaas aan la baran, waxay la timid xanuun, farxad iyo waaya aragnimo kale. Markii aan sii weynaaday ganacsigeyga, waxaan ogaadey in waqtiga badan ee aan ku bixiyo dejinta rajooyinka, natiijada ka sii wanaagsan ama ka xun ay la jirto macaamiisheena. Haddii aan iraahdo waxaan helayaa wax ii qabsoomay waxayna igu qaadataa waqti ka dheer intii aan filayay - filashadii la seegay waxay keentaa jahwareer. Haddii aan idhaahdo waxaan helayaa wax la ii dhammaystiray oo waxaan ku bixiyaa mashruuca marka lagu daro shaqada kale ee qiimaha leh - Waan dhaafay wixii laga filayay macmiilkuna wuu faraxsan yahay
Weli marar badan ayaan gaabiyaa, laakiin aasaaska guushayda ganacsigu waxay si dhow ula jaanqaadaysaa rajooyinka aan dejiyey. Ma aaminsani inay taasi tahay epiphony - laakiin waxaan aaminsanahay inay aasaas u tahay suuqgeyn wanaagsan iyo mid xun oo ganacsi kasta oo internetka ah. Dejinta rajooyinka si weyn ayaa loo qiyaasaa. Adeegso kiisaska, daraasadaha kiisaska, tirakoobka, war-saxaafadeedyada, qoraallada, cusbooneysiinta… wax kasta oo aan sameyno ayaa inta badan ku saabsan seenyada ugu fiican, maahan xaalado macquul ah.
Toddobaadkan waxaan u safray Florida si aan u soo dhoweeyo wiil aan abti u ahay oo ka soo noqday shaqaalihiisii ​​ugu horreeyay ee uu ka dejiyo Gacanka. Waxaan hoos ula degay eeygayga, markaa wax badan baan joojinnay. Hal aag nasasho oo ku yaal Florida, waxaan ka helay calaamadan halkii kaftan badan kaadida.
Dhibaatada calaamadda, dabcan, waxay tahay in inta ay suuqgeynayso otomaatigga kaadida, meel caqli gal ah oo aniga oo kale ah, waxay siisaa farriin suuq gebi ahaanba ka duwan, aan la heli karin. Hawlgalku, dabcan, ma ahan mid gacmo-la’aan ah… oo noqon lahaa wax aad u yaab badan laakiin waxay u badan tahay inuu sharci-darro yahay.
Waa inaan ka taxaddarnaa rajooyinka suuq-geynta ee aan dejinnay. In kasta oo hadafkeenu noqon karo in aan la xiriirno horumarka iyo maalgashiga aan sameyno, haddana qasab ma ahan in isla farriinta aan ugu gudbinno dhagaystayaasheena.
Dejinta rajooyin sax ah, oo la heli karo oo ku saabsan dadaalkaaga suuq-geynta ayaa kaa caawin doonta inaad aqoonsato oo aad xirto macaamiisha saxda ah, taasoo kuu horseedi doonta sii-haynta kororka iyo qiimaha macaamiisha oo weyn. Dejinta rajooyin liita uma horseedi doonto oo keliya heerarka isku-xirnaanta sare, waxay sidoo kale eryi kartaa dib-u-eegista liidata iyo wadahadalka bulshada ee khadka tooska ah. Tani, markeeda, waxay eryi kartaa ganacsiga oo haddii kale macaamiil wanaagsan noqon kara.
Aasaaska dhammaan suuqgeynta ayaa ah dejinta rajooyin waaweyn. Suuqgeynta weyni waxay horseedaa xiriiro macmiil oo weyn, taas oo horseedaysa dhisida sumcad weyn oo khadka tooska ah ah… taasoo u horseedaysa macaamiil aad u tiro badan.
Tags: laga filayofunnygacmo-la'aan
Dhis CTAs oo u qaybi sidii Xayeysiis Banner leh Bannersnack
Nov 13, 2014 at 3: 38 AM
Qodob kasta oo aad qortay wuxuu ku habboon yahay sida roobka oo kale.
Dejinta filashooyin macquul ah halkii aad kafiican laheyd waa natiijooyin badan oo ku jiheysan. Suuqgeynta Wanaagsan iyo Xun waa dhammaan ciyaarta dejinta rajada.
Waana inaan idhaahdaa tusaalaha aad bixisay waa uun maskaxda oo afuufaysa L .LOL
Nov 21, 2014 at 9: 24 AM
Farriin weyn - Waxaan ku ballaariyey mowduucan oo ku yaal boggeygii ugu dambeeyay. Runtii waa la i sharfi lahaa haddii aad iska hubiso oo aad wax jawaab celin ah i siiso? https://www.linkedin.com/pulse/article/20141121125524-103311141-are-marketers-living-up-to-customer-expectations-this-christmas
Si kastaba ha noqotee, sii wad hawsha wanaagsan!